Sida loo ogaado haddii iPhone-gaagu cusub yahay, dib loo hagaajiyay, la shaqsiyeeyay ama la beddelay | Wararka IPhone
Sida loo ogaado haddii iPhone-gaagu cusub yahay, dib loo hagaajiyay, la shaqsiyeeyay ama la beddelay
Xaqiiqdii, haddii aad tagto Dukaanka Apple oo aad iibsato iPhone, shaki kama qabtid inay tahay terminal cusub. Sidoo kale, haddii aad ka mid tahay kuwa inta badan hela moodellada dib loo cusboonaysiiyay -dib loo cusbooneysiiyey- shaki ha qabin sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, Maxaa dhacaya haddii aan ka hadalno suuqa gacanta labaad? Ma fiicnaan laheyd inaad hubiso meesha iPhone-ka aad damacsan tahay inaad ka iibsato uu ka yimaado?
Sida aan baranay, waxaa jira 4 nooc oo kiisas ah oo aad ka heli karto iPhone-ka: cusub, dib loo cusboonaysiiyay, beddelaad ama la habeeyay. Xaqiiqdii, jaleecada hore, way kugu adagtahay inaad ogaato nooca iPhone ee aan ka hadlayno. Hadda, haddii ay tahay iibsi gacan labaad, hubaal waxaad dooneysaa inaad ogaato haddii tusaalahaasi uu soo maray gacmo badan. Iyo Actualidad iPhone waxaan kuu fududeyneynaa inaad ogaato asalkeeda.
Miyaad ka fikireysaa inaad iibsato iPhone dib loo hagaajiyay? Boggan waxaad ka heli doontaa moodellada iPhone-ka ee dib loo cusboonaysiiyay waxaana lagu iibiyaa dammaanad ah inay si fiican u shaqeeyaan. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad hesho oo aadan jeclayn, waad ku soo celin kartaa bilaa waajib iyo fudeydka Amazon, adigoon wax khatar ah gelin.
Sida ay nooga barayaan OSXDaily, qaarna tillaabooyin fudud iyada oo loo marayo menu-dejinta waan ogaan karnaa haddii iPhone-gaagu cusub yahay ama 3-da koox ee ku xiga. Si aan u ogaanno, waa inaan tagno «Dejinta», guji «Guud» waana inaan galno liiska «Macluumaadka». Qaybtaan waxaan ku heli doonnaa dhammaan macluumaadka ku saabsan terminalka: nooca iOS ee aan isticmaaleyno, keydinta aan helnay; imisa sawir ayaan kaydinay; hawlwadeenadee ayaan adeegsanaa; nambarka taxanaha ah iyo waxa na daneynaya ayaa ah qeybta tilmaamaysa "Model".
Waxaad arki doontaa in macnahaas, astaamaha naloo soo bandhigay waxaa ka horreeya warqad. Tani waxay noqon kartaa: "M", "F", "P" ama "N". Hoos waxaan ku sharaxeynaa mid kasta oo ka mid ah macnaheedu:
«M»: waa warqadda lagu garto in terminalku yahay a cutub cusub
«F»: waxay noqon doontaa a cutubka dib loo cusboonaysiiyay; Apple ayaa dib u soo celisay waxayna ku iibineysaa qiimo ka wanaagsan tan iyo markii xaaladdan ay tahay gacan labaad
«P»: waa a cutubka caadada; taas oo ah, waxaa lagu xardhay dhabarka
«N»: waa a qaybta beddelka taas ayaa loo wareejiyaa isticmaalaha maxaa yeelay adeeg dayactir ayaa la codsaday, tusaale ahaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo ogaado haddii iPhone-gaagu cusub yahay, dib loo hagaajiyay, la shaqsiyeeyay ama la beddelay
Carlos Luengo Heras dijo
Aniga ayaa ah nooca ku badala barxad caqli gal ah cilad asalkeedii hore asalka oo yiri N.
Ku jawaab Carlos Luengo Heras
Waad ku mahadsantahay warbixintaas runtii waan jeclaaday sida loo ogaado hadii iphone-kayga cusubi cusubyahay oo sifiican loo adeegsaday ..
Haddayse leedahay A ??
Xiiso badan, anigu kamaan warqabin tan, runta ayaa ah inaan u arko mid xiiso leh inaan ku siiyo macluumaadkan.
Jawaab Pedro Reyes
Javier Ruiz Murcia dijo
Miina sidoo kale waxay sheegtaa N. Oo waxaan u maleeyay inay iyagu mar kale i siiyeen maxaa yeelay taydu waxay ahayd. Ma la sheegan karaa?
Jawaab Javier Ruiz Murcia
Salaan! Sidee ayey ula socotay iphone-kaaga oo moodalku ku bilaabmay xarafka N ???
Ku jawaab Hector
Waad salaaman tahay marka haddii N ay ka soo muuqato tusaalaha micnaheedu maahan mid cusub ma noqon kartaa mid cusub xitaa haddii ay tahay unug beddelaad ah?
Sida kuwa kale ee aan halkaan ku arko, dhibaato ayaan ku qabay midkeygii hore oo SAT ayaa u beddelay midka aan hadda haysto, kaasoo gabi ahaanba ahaa mid cusub, laakiin nambarkiisa moodeelka sidoo kale wuxuu ku bilaabmayaa "N". Waa la dayactiri karaa, laakiin sidaas uma maleynayo. Xitaa waxay i siiyeen qaansheegta "dayactirka" markii aan soo qaaday sidii inaan amro mobiil cusub (oo sicirkiisa asalka ah la calaamadeeyay, kaasoo ahaa qiimo cusub) laakiin qiimo dhimis lagu sameeyay si aan eber u bixiyo. Waxaan ka goynayaa "N" kaliya maahan inay micnaheedu tahay inay tahay deyn inta ay kuwaaga hagaajinayaan, laakiin sidoo kale inay iyagu yihiin kuwii beddeli lahaa markii ay halkii kaa kaa hagaajin lahaayeen ay ku siinayaan qayb kale.
Ku jawaab magacaaga
Hadda waxaan haystaa beddelkeyga 6 + 8keyga oo fadhiya, waxaana ku qoran "M", Ma garanayo sida lagu kalsoonaan karo macluumaadkaas.
waa isku mid dijo
ninyahow, dukaanku wuxuu ku siin karaa terminaal cusub haddii uu doono oo uusan "amaahin" lahayn ...
Ka jawaab isla
Javier Ruiz dijo
Macluumaadka ku jira maqaalkani gabi ahaanba waa BEEN, oo waxaad ku sigatay inaad iibiso iphone x x dhawr maalmood ka hor.
Waxaan iibsaday iphone x maalintii aan soo baxay ku dhowaad sanad kahor nambarkuna wuxuu ka bilaabmayaa F.
Markaad akhrinaysid qoraalkaaga, wac adeegga macmiilka tufaaxa, kaas oo wadatashiyo badan ka dib, si cad u beeniyey waxa boggan ka warbixinayo. Waxay ku doodeen in aysan macquul aheyn in la helo cutub dib loo qiimeeyay maalinta ugu horeysa ee iibinta ee dadweynaha, tan labaadna sanduuqa wuxuu dhigayaa isla lambar taxane ah isla markaana qaybaha dib loo cusbooneysiiyey laguma soo ridayo sanduuqa Apple oo ay ku jiraan dhammaan qalabka, laakiin sanduuq aan calaamado lahayn (taasi waxay igu dhacday aniga oo leh iphone 5 iyo saacadda tufaaxa xaaskeyga).
Waana sidoo kale inaan iibsaday XS MAX isla maalintii uu iibka ahaa oo nambarkiisu BILAABO TB BY F.
Haddii aad doonayso inaad noqoto bogga tixraaca ee su'aalaha ku saabsan iphone, waa inaad si fiican u xaqiijiso macluumaadkaaga. Waa talo. mararka qaarkood shaqaaluhu si kadis ah ayey waxyeello u soo gaartaa adigana waxaad leedahay masuuliyad ahaan inaad xog-waran tahay
Jawaab Javier Ruiz
Waan ka xumahay inaan kuu sheego Javier, inay jiraan bogag badan oo ku saleysan xarfahan si loo aqoonsado asalka, runti waxaan haystaa Ipad laga soo bilaabo seddex sano ka hor, IPhone iyo Apple Watch, dhammaantoodna waxay ku bilowdaan M. Ama koodhadhkii ayaa is beddelay ama ma aanan sharxin. Dhinaca kale, waa dhif iyo naadir in aaladda noocaas ah ay la yimaadaan warqaddaas, illaa ay beddelaan qaabka. Waxaan sugayaa isbadal suurtagal ah ee taxanaha taxanaha 3, haddii ay beddelaanna, waxaan kala kulmi doonaa qofka koowaad. Dhamaan wanaag.
Isla wixii ku dhacay Javier ayaa igu dhacay.
Waad i wareerisay.
Waxaan hayaa iPhone XS oo la iibsaday waxyar kadib markii aan baxay, ee MM, shaabadaysan, lambarkiisuna wuxuu ku bilaabmayaa F.
Waxaan sidoo kale iibsaday iPhone 8 Plus bishii Juun, ee MM, shaabadaysan, sidoo kale waxay ku bilaabataa F.
Ma waxay i iibiyeen laba moobil oo dib loogu cusboonaysiiyay moobillo cusub? Mise Apple waxay u qaybisaa sidii qalab cusbooneysiin cusub?
Runtu waxay tahay hada waxay iga tageen dhadhan xun oo afkayga ku jira.
Iyada oo dhammaan ixtiraamka la mudan yahay, mudaneyaasha dareemaya jahwareer / khiyaano; waa inaad la socotaa in shirkadaha (qaar ka mid ah shirkadaha Apple qaybiya ee dalal gaar ah, iyo noocyo kale) ay ku takri-falaan macluumaadkaas qaldan si ay si qaldan ugu iibiyaan wax soo saarka.
Sida loo kiciyo farriimaha ku shaqeeya iCloud ee ka socda iPhone
WhatsApp wuxuu yimaadaa CarPlay kahor Apple Watch